twl – Page2– PwintsSan
ယနေ့ခေတ်မှာ အဖြစ်များလာတဲ့ လေဖြတ်ခြင်းကို ဘယ်လို ကာကွယ်နိုင်သလဲ
ယနေ့ခေတ်မှာ အဖြစ်များလာတဲ့ လေဖြတ်ခြင်းကို ဘယ်လို ကာကွယ်နိုင်သလဲ လေဖြတ်တယ်ဆိုတာ ကျန်းမာရေးအရ အရေးပေါ် အခြေအနေတရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်အတွင်းရှိ ဆံချည်မျှင် သွေးကြောတွေ ပေါက်ထွက်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် ဦးနှောက်အတွင်း သွေးကြောပိတ်ဆို့တာ ကြောင့် လေဖြတ်ခြင်း ဖြစ်တာပါ။ ဦးနှောက်အတွင်း သွေးကြောပိတ်ဆို့တာက အဖြစ်အများဆုံးပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင် လေဖြတ်ခြင်းဟာ […]
ညအိပ်ယာထဲအထိ အွန်လိုင်းသုံးခြင်းရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ဆိုးကျိုးများ
ညအိပ်ယာထဲ အထိ အွန်လိုင်းသုံးရင် ဘယ်လောက် ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်သွားပါ။ ညအိပ်ယာထဲအထိ အွန်လိုင်းသုံးခြင်းရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ဆိုးကျိုးများ ကျန်းမာရေးပါရဂူကြီးများရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ လူသားတွေအတွက် အကောင်းဆုံး အိပ်စက်အနားယူချိန်ဟာ ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၃ နာရီအတွင်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအဆိုကို ဆေးပညာရှင်များအားလုံးနီးကလည်း လက်ခံထားကြပါတယ်။ […]
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်မြို.၊ န၀န်းကမ်းနားလမ်းနေ ဦးစန်းဝင်း(ဆိုက်ကားဆရာ၊ နိဗ္ဗာန်ဆော် ) ဆိုက်ကားနံပါတ်၁၆၆၁ဖြင့်ဆိုက်ကားနင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေပြီးအကျီအနွမ်းလေးဝတ်၊ ဦးထုပ်အဟောင်းလေးဆာင်းပြီး နေပူပူမှာ ဘ၀၀မ်းစာရေးကိုဖြေရှင်းနေရပေမယ့် စိတ်ဓါတ် ရိုးသားမြင့်မြတ်သူရဲ. နိုင်ငံကြီးသားပီသလှတဲ့ ဖြစ်ရပ်လေး ကိုဂုဏ်ပြုလိုက်ရပါတယ်။ (၃၀) ရက်နေ.က လစာထုတ်ရက်မို. မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှာ ငွေထုတ်သူတွနဲ.စည်ကားလှတဲ့အချိန်၊နေ.လည်ပိုင်းမှာ ဌာနဆိုင်ရာတစ်ခုက ငွေစာရင်းကိုင်ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ဘေးက ပီစီအိုဘးမှာ […]
မိန်းမသားတို့ အတွက် သန္တာလှိုင် ရေးထားတဲ့ အဖိုးတန်စာစု
မိန်းမသားတွေအတွက် မှတ်သားဖို့ ကောင်းတဲ့ သန္တာလှိုင် ရဲ့ စာစုလေးကို ပပ၀တီ က ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ သန္တာလှိုင် က ဒီစာ ကို ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ လ ၁၀ ရက်နေ့ က ရေးခဲ့တာပါ။ သန္တာလှိုင် ဟာ သူ့ ဘ၀အတွက် အဖော်မွန် […]
အဆီများတဲ့ငါးတွေရဲ့ အဆီတစ်ရှူးကနေ ထုတ်ယူထားတဲ့ ငါးကြီးဆီမှာ DHA တို့၊ EPA တို့လိုမျိုး ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ ပါဝင်သလို omega3ဖက်တီးအက်ဆစ်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ငါးကြီးတွေဟာ omega-3 ဖက်တီးအက်ဆစ်ကို ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် ငါးသေးသေးလေးတွေ၊ ရေညှိတွေကို စားသောက်ပေးရတဲ့အတွက် ငါးကြီးဆီထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် […]
နာမည်ကျော် ရှေးဖြစ်ဟောဆရာမကြီး BABA VANGA ရဲ့ အနာဂတ်ကာလအတွက် ထိတ်လန့်ဖွယ် ဟောကိန်းများ
၁၉၉၆ တွင် သေဆုံး ခဲ့သည့် မျက်မမြင် Vanga အမျိုးသမီးကြီး ရဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ် ဟောကိန်း များ ဟာ မှန်ကန် ခဲ့တာ ကြောင့် သူမ ဟာ ကမ္ဘာကျော် ခဲ့ ပါတယ်။ သူမ အသက် သုံးနှစ် အရွယ် ကတည်း […]
ရွှေမန်းသဘင်အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ဝေဖန်လို့ ပေါက်ကွဲနေတဲ့ ကျော်ကျော်ဗိုလ်ရဲ့အမ
တစ်ခေတ်တခါက အချိန်ပေးပြီး ကြည့်ရှု့ခဲ့ကြရတဲ့ ဇာတ်သဘင်လောကမှာ အရမ်းကို အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ရွှေမန်းသဘင်ခါ ယနေ့ထက်တိုင် နာမည်ကြီးနေတုန်းပါဘဲ ။ ရွှေမန်းသဘင်ဆိုတာ သစ္စာမေတ္တာရွှေမန်းသဘင်၊ အလင်္ကာကျော်စွာရွှေမန်းတင်မောင်ရဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်ပြီး သားစဉ်မြေးဆက် လက်ဆင့်ကမ်းအမွေကို ထိန်းသိမ်းလာခဲ့သူတွေလဲ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယခုအခါမှာဘဲ တချိန်က ဇာတ်သဘင်လောကမှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဝင်းဗိုလ်၊ စည်သူဗိုလ်၊ တင်မောင်ဆန်းမင်းဝင်း၊ […]
လာဘ်လာဘ ပြည့်ဝစေတဲ့ (ရှင်သီဝလိ ဂါထာတော်) နှင့် ထူးဆန်း အံ့သြဖွယ် (ရှင်သီဝလိ ထေရုပ္ပတ္တိ) အကြောင်း
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက ရှင်သီဝလိကို ကိုးကွယ်ပူဇော်လျှင် အရောင်းအ၀ယ် ကောင်းသည်။ လာဘ်လာဘ ပေါများသည်ဟု ယုံကြည်ရင်းစွဲ ရှိကြသည်။ ယင်းသို့ယုံကြည်သည့်အလျောက် ရှင်သီဝလိပုံတော်ကို ထုလုပ်ကိုးကွယ်၍ အဆောင်ကောင်းအဖြစ် သွားလေရာသို့ ယူဆောင်သွားကြသည်။ ရှင်သီဝလိဆိုသည်မှာ လာဘ်လာဘ ဖွံ့ဖြိုးသော ရဟန္တာတပါးဖြစ်ကြောင်းကိုမူ အားလုံးက သိထားကြ၏။ ရှင်သီဝလိနှင့်ပတ်သက်၍ တောင်းခဲ့သော ဆု၊ ပြုခဲ့သော […]
ဘယ်သွားသွား ဘယ်လာလာ ပဌာန်းစာအုပ်မပါလို့ဆိုတာမျိုး မကြုံရလေအောင် ဖုန်းထဲကနေပူဇော်နိုင်င်ရန် ရှယ်ပြီး သိမ်းထားလိုက်ပါ
ပဌါန်း.. ဘယ်သွားသွား ဘယ်လာလာ ပဌာန်းစာအုပ်မပါလို့ ဆိုတာမျိုး မကြုံ ကြရလေအောင် ဖုန်းထဲမှာတင် သိမ်းထားပြီး ပူဇော်ရွတ်ဖတ်နိုင်ကြစေရန် ကုသိုလ်ပြု မျှဝေလိုက်ပါသည်။ အသိဥာဏ်အလှူ အမြတ်ဆုံးမှ.. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. […]
ရှဉ့်မတက်ကို ကုန်းကညွှတ်ဟုလည်းခေါ်ကြသည်။ ရှဉ့်မတက်၏ ရုက္ခဗေဒအမည် မှာ(Asparagus Racemosus Lin) ဖြစ်သည်။ မြန်မာအမည်ဖြင့် ကညွတ်ရှဉ့်မတက်ဟု ခေါ်သည်။ ရှဉ့်မတက်၏ မူလမျိုးရင်းမှာ နှင်းပန်းမျိုးရင်း ဖြစ်သည်။ ပုံသဏ္ဍာန်အားဖြင့် ဆူးခြုံနွယ်ဖြစ်ပြီး ဆူးငယ်လေးများ အများအပြား ပါရှိ လေသည်။ အပင်အောက်ခြေမြေကြီးထဲတွင် ဥများ များပြားစွာအုနေတတ်သည်။ အရွက်မှာ […]